पाक्दै गरेको खिचडी कसकसको थालमा पस्किने ? | OnlinePatrika.com - News of Nepal, latest and breaking news from Nepal
पाक्दै गरेको खिचडी कसकसको थालमा पस्किने ?
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित सबै व्यवसायीलाई बैंक कर्जामा २ प्रतिशत ब्याजदर छुट दिने निर्णय गरेको भर्खरै हो । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैशाख १६ गते सर्कुलर जारी भइसकेको छ ।
देशका उनै सुलभ अग्रवाल, जो कोरोनाकै कहरवीच कूटनीतिक सुविधाको सवारी साधन दुरूपयोग गरी लकडाउनको समयमा ज्वरो नाप्ने थर्मोगन कालोबजारीमा बेच्दै गर्दा रंगेहात समातिए । शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष तथा जगदम्बा स्टिल्स र जगदम्बा सिमेन्ट कम्पनीका प्रमोटर अग्रवाल यतिखेर धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।
सिमेण्ट, स्टिल्स, कपडालगायत दुई दर्जन भन्दाबढी उद्योग तथा कारखाना र होटल, बीमा, रियल इस्टेट, मोबाइल तथा अन्य व्यापार गरी अग्रवाल झण्डै तीसवटा कम्पनीका मालिक हुन् । उनले नेपालका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग २५ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको कर्जा लिएका छन् । राष्ट्र बैंकको ठाडो निर्देशनअन्तर्गत अब उनले पनि बकायदा १२ करोड ५० लाख रूपैयाँ ब्याज छुट पाउनेछन् । यस्तो निर्णयले प्रष्ट हुन्छ की कता र कहाँकहाँ खिचडीको स्वादले मुख मिठ्याईरहेका छन् ।
Previous articleनेपालको नक्सा छापेर बेच्नेहरुलाई सरकारको निगरानी : बिक्री वितरण गरे कारवाही
Next articleकीर्तिपुरमा कोरोना परिक्षण : जनप्रतिनिधिहरुको पीसीआर नेगेटिभ आएपछि खुशीयाली !